I-Silicon Nitride i-pinam cent pining China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > Ubunjiniyela beCeramic Component > I-Structural Ceramic Component > I-Silicon Nitride i-pinam cent pining
Yenziwe nge-Silicon Nitride ceramics. Esikhathini esivamile, sisebenzisa ukwenziwa komjovo we-ceramic ukwakha lolu hlobo lwephini elihle le-ceramic, kulula ukuthola izingxenye ze-ceramic ezicacile.
Ngezinye izikhathi, kudingeka ukubekezelelana okungcono ukuze uhlangabezane nesicelo esenziwe ngokwezifiso ukuze inqubo yesibili izokwenziwa, njengokugaya amafutha, ukusika, ukupholisa, nokuthola imininingwane yokugcina.
Siyakwazi ukukhiqiza ezinye izinto ezibonakalayo ze-ceramic pinering, ukufakwa kwe-ceramic emidwebeni yamakhasimende noma amasampula ngesikhala sethu sokwakha isikhunta. Kungakhathaliseki ukuthi kukhonjiswa noma ukukhiqizwa kwenqwaba yezindleko, sizobe sesikusiza ekuphumeni kahle.